हिजो दिनभर : सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भयो–प्रधानमन्त्री, एमसीसी मात्रै होइन, सम्झौता त अरू पनि रैछन् - भीम रावल
गृहजिल्लाबाट प्रम ओलीले भने, 'विकासको रफ्तार रोक्न सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भयो'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठीक २ वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार संसदलाई सम्बोधन गरे।
प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनको क्रममा उनले सरकारका उपलब्धीको चर्चा मात्र गरेनन् ‘सरकार २ वर्ष टिक्नु पनि उपलब्धीका रुपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनले भनेका थिए, ‘एउटै सरकारले २ वर्ष पूरा गर्नु पनि उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्ने रहेछ।’
उनले संसदमा सम्बोधन गरेको भोलिपल्ट गृहजिल्ला झापा पुगेका प्रम ओलीले गरेको सम्बोधन चर्चाको विषय बनेको छ।
ओलीको नेतृत्वमा ५ वर्षका लागि सरकार गठन भएको थियो। तर उनले झापाको दमकमा भने, ‘सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको’ छ।
कसले षडयन्त्र ग-यो भनेर नखुलाएका प्रम ओलीले भने, ‘सरकारविरुद्ध विभिन्न शक्ति केन्द्रले षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। मुलुकको विकासको रफ्तारलाई रोक्न एकल बहुमतवाला सरकारलाई पनि ढाल्ने क्रियाकलाप जारी छ। '
एमसीसी मात्रै होइन, सम्झौता त अरू पनि रैछन् - भीम रावल
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अध्ययन कार्यदलका सदस्य भीम रावलले एमसीसी मात्र नभएर दर्जन अरू सम्झौता रहेको खुलासा गरेका छन् ।
आइतवार कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रावलले अन्य सम्झौताको पनि अध्ययन हुँदै गरेको बताए ।
'संसदमा प्रस्तुत भएको त एउटा मात्र रैछ, अरू त एक दर्जन सम्झौता भइसकेको रहेछ,' रावलले भने, 'हामीले सबै सम्झौताको अधययन गरिरहेका छौं । प्रतिवेदनमा सबै समेटेर सार्वजनिक गर्छौं ।'
नेता रावलले अध्ययन कार्यदलले निष्कर्ष नदिने बेलासम्म कोही कसैले यसबारेमा बोल्न उपयुक्त नहुने बताए ।
कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी जसरी पनि पारित हुने वक्तव्य बारम्बार दिने गरेका छन् ।
रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार एमसीसीका बारेमा गरेका टिप्पणी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विरुद्ध रहेको आरोप लगाए ।
'कार्यादेश भन्दा फरक किसिमले अभिव्यक्ति दियो भने केन्द्रीय कमिटीलाई सम्मान गरेको हुँदैन,' रावलले भने, 'कार्यदलले अध्ययन पूरा नगरीकन निष्कर्ष सुनाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले कसैलाई दिएको छैन ।'
कार्यदलको विपक्षमा कसैले बोलेदेखि त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरित हुने उनले बताए ।
गत माघ १९ गते सम्पन्न भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलमा रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।
कार्यदललाई एमसीसी अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिनको म्याद दिइएको थियो । १० दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि पहिलोपटक फागुन १ गते १० दिनको म्याद थपिएको हो ।
कार्यकर्तालाई प्रचण्डले भने – कोहीलाई रिस उठ्ने, छोडेर हिँडुम् भन्ने पनि हुन सक्छ !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पद प्रतिष्ठा पाउनको लागि मात्रै पार्टी एकता नगरिएको बताएका छन् ।
समृद्धि र समाजवादको यात्रा तय गर्न पार्टी एकता गरिएको बताउँदै उनले यहीँ कामको प्रचारका लागि सबै प्रदेशमा प्रशिक्षणका कार्यक्रम राखिएको बताए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश संगठन कमिटी ५ नम्बर प्रदेशले कोहलपुरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालोले जनतामा कन्फ्यूज गराएकाले त्यसलाई त्यागेर अहिले एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको बताए ।
‘बडो सुझबुझको साथ, धैर्यताका साथ सर्वसम्मतबाट निर्णय गरेर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘पार्टी एकता टुंगियो । केही बाँकी रहलपहल होला । महासचिवसँग बसेर टुंगिन्छ ।’
प्रचण्डले राजनीति एकतालाई सांगठनिक एकता र भावनात्मक एकता बनाउनुपर्ने बताए । ‘कोही कोहीलाई झमेला लाग्न सक्छ, रिस उठ्ने, छोडेर हिँडुम भन्ने पनि हुन सक्छ तर हामीले के सोच्नुपर्‍यो भने सामाजिक, भावनात्मक, वैचारिक ढंगले सुदृढीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश इन्चार्ज तथा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्दै पार्टी एकताको सन्देश, सरकारका राम्रो काम जनताको माझ पुर्‍याउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइएको छ । १२ जिल्लाका ३ हजार अगुवा पार्टीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ ।
महराको मुद्दामा बहस सकियो, आदेशको पर्खाइ
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा बहस सकिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा दुवै पक्षका वकिलको बहस सकिएपछि आजै फैसला आउने सम्भावना प्रबल छ ।
महराको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, लव मैनाली, शेरबहादुर केसी, डा. भीमार्जुन आचार्य र सविता भण्डारी बराल तथा अधिवक्ताहरू सुशील सापकोटा, मुरारी सापकोटा र डा. दीनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
महरा पक्राउ परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढेको थियो ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन कात्तिक १८ गते आदेश दिएको थियो ।
ललितपुरका पूर्वमेयर शाक्यको निधन
नेपाल नगरपालिका संघका संस्थापक अध्यक्ष एवं ललितपुरका पूर्वमेयर वेखारत्न शाक्यको निधन भएको छ ।
शाक्यको ८९ वर्षको उमेरमा आइतवार झम्सिखेलस्थित निवासमा निधन भएको हो ।
गणेशमानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य समेत रहेका शाक्यको निधनप्रति कांग्रेस नेताहरूले दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशी तथा उदय शमशेर राणाले शाक्यको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
खरिपाटी ‘क्वारेन्टाइन' : चिया, अण्डा, चना र पाउरोटी खाजापछि खकार र घाँटी परीक्षण
चीनको कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरेर ल्याइएका नेपालीलाई राखिएको भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको खरीपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा बिहानको खाजामा चिया, अण्डा, चना र पाउरोटी दिइएको छ ।
आइतवार बिहान काठमाडौं पुर्‍याइएका नेपालीलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा लगिएको थियो ।
सरकारले बिहानको खाजामा चिया, पाउरोटी, चना र अण्डा दिएको क्वारेन्टाइनमा रहेका एक विद्यार्थीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘बिहान लगभग ९ बजेतिर ब्रेकफास्ट खाएका थियौं । चिया, पाउरोटी, चना र अण्डा खाएका थियौं,’ उनले आइतवार दिउँसो भने ।
खाजापछि सबैको खकार, घाँटी लगायतको परीक्षण गरिएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टर टेकुबाट आएका डाक्टरले नमूना संकलन गरेको ती विद्यार्थीले लोकान्तरलाई बताए ।
‘टेकुबाट डाक्टर आउनुभएको थियो । घाँटी, खकार, ज्वरोहरू परीक्षण गर्नुभयो । अहिले लगभग सबै जनाको परीक्षण सकिएको छ,’ ती विद्यार्थीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली र यूएईका युवराजबीच फोन वार्ता: 'न...
कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वोच्चको ९ बुँदे आदेश, भ...